China Ivermectin Kugadzira uye Fekitori | Veyong
Molecular fomura: C48H74O14
Ivermectin chena crystalline upfu, odorless. Inosununguka zvakasununguka mu methanol, ethanol, acetone, ethyl acetate, isinganyungudike mumvura, uye zvishoma hygroscopic. Ivermectin is a semisynthetic macrolide multi-component antibiotic, iyo inonyanya ivermectin B1 (Bla + B1b) yezvinhu zvisiri pasi pe93%, iyo Bla yemukati isingasviki 85%.
Ichi chigadzirwa chine sarudzo inosarudzika, nekusunga kuhukama hwakanyanya hwechloride chiteshi ine glutamate sevhavha mumasero etsinga uye maseru emhasuru emhuka dzakatenderera, izvo zvinotungamira mukuwedzera kwekubvumidzwa kwenzvimbo dzesero kune chloride ions, inokonzeresa hyperpolarization yenzara masero kana tsandanyama maseru, uye anokonzera kuoma mitezo kana kufa kwezvipembenene. Iyo zvakare inopindirana nemakloride chiteshi eimwe ligand mavharuvhu, senge iyo neurotransmitter g-aminobutyric acid (GABA). Iko kusarudzwa kwechigadzirwa ichi imhaka yekuti dzimwe mhuka hadzina glutamate-chloride chiteshi mu vivo, uye avermectin ine hukama hwakaderera chete hwe mammalian ligand-chloride chiteshi. Ichi chigadzirwa hachigone kupinda mukati meropa-rehuropi hwevanhu. Onchocerciasis uye strongyloidiasis uye hookworm, ascaris, Trichuris trichiura, uye Enterobius vermicularis hutachiona.
Ivermectin imushonga unoshandiswa kurapa mhando zhinji dzehutachiona. Ivermectin inoshandiswa kurapa mhuka mhuka dzinokonzerwa nehonye uye ectoparasites.
Ivermectin inogara ichishandiswa kudzora makonye emushonga wemudumbu wemhuka dzinokambaira. Aya maparasita anowanzo pinda mumhuka painenge ichifura, ichipfuura ura, uye ichigadzika nekukura mumatumbu, mushure mezvo inoburitsa mazai anosiya mhuka kuburikidza nemadonhwe ayo uye anogona kuzadza mafuro matsva. Ivermectin inoshanda mukuuraya dzimwe, asi kwete dzese, dzezvipembenene izvi. Muimbwa inowanzo shandiswa seprophylaxis kurwisa chirwere chemoyo.
Mukurapa kwezvipfuyo, inoshandiswa kudzivirira nekubata moyo weshungu uye acariasis, pakati pezvimwe zvinoratidza. Inogona kutorwa nemuromo kana kuiswa kune ganda kune ekunze infestations. Ivermectin inoshandiswa zvakanyanya kumatumbu nematumbu, mapapu, uye zvipembenene zvipembenene mumombe, makwai, mabhiza, uye nguruve, ura nematodes muimbwa, nzeve mite, Sarcoptes scabiei, moyo filariae, uye microfilariae, uye matumbo nematodes uye ectoparasites muhuku.
Ivermectin jekiseni1%, 2%, 3.4%, 4%;
Ivermectin remuromo mhinduro 0,08%, 0,8%, 0,2%;
Ivermectin yekudira-mhinduro 0,5%, 1%;
Zvadaro: Mutengo wepasi China Ivermectin Clorsulon Fekitori Ipa 99% Ivermectin Clorsulon Jekiseni CAS 60200-06-8 Horse Mombe Wormer